Nzira Yokurwisana Nayo Spam Traffic NeGoogle Analytics Filters? - Semalt Inozivisa Mhinduro
Zvingave zvisingaiti kuti isu tose tiparadze spam mutafura neGoogle Analytics filters. Pane mikana yokuti izvi zvingaitika kuvanhu vose sevas spammers vachitamba nenzvimbo dzakawanda zuva rega rega. Zvine ngozi pamabhizimisi ako uye zvinogona kuparadza mukurumbira wako pane internet. Imwe dambudziko nderokuti ghost traffic, uye spam hazvikupi mhinduro yakarurama mumashoko e webhusaiti yepamutemo . Vanogara vachikupai maonero nekukwirira kwepamusoro, zvichikutungamirira kuti unzwe kuti uri kuwana maonero akawanda uye mazuva ose. Zvakakosha kwatiri kuti tiwane maonero mashomanana zuva rega rega, tichiva nechokwadi chehutano hwavo. Kusiyana neizvi, mawebsite anowanikwa maonero akawanda uye zvishoma kudarika kuwedzera kwekuwedzera haagoni kuita zvakawanda zvekutungamirira. Kana iwe uri mumwe wavo, unofanirwa kuchinja mazano ako uye kuvaka nzvimbo inovimbwa nayo yeIndaneti. Kunyange kana iwe uchiziva kuti spammers aripo, haufaniri kukakavadzana navo uye kugadzira mamwe mafiritsi kuti uibvise zvachose.
Nenzira yakajeka, mamwe maitiro uye nzira dzinowanika kubvisa spammers neGoogle Analytics. Iwe unogona kugadzira mafaira uye kugadzirisa zvakawanda zvezvinetso zvako paIndaneti.
Unyanzvi hwepamusoro kubva Semalt Digital Services, Ivan Konovalov, anotarisa pano pane zvimwe zvinhu zvinokosha zvaunofanira kugara uchifunga:
Kuumba maonero matsva
Zvakanaka kuumba maonero matsva mushure mekugadzirisa zvirongwa muzvese yeGoogle Analytics..Iwe unofanirwa kuumba mafaira matsva, asina kutorwa munhamba huru uye kuputsa zvinhu muzvikamu. Pakutanga, izvi zvinotora nguva asi zvinogona kukubatsira kugadzirira mamiriro ehutano. Iwe unofanirwa kuenderera kuChikamu chechikamu chebhuku rako reGoogle Analytics uye gadzirisa View Setting. Pano iwe unofanirwa kusika maonero akasiyana uye mafikisi akasiyana uye uite kuti ibatane.
Kuisa yakanyanyisa filuta
Unogona kuisa nhamba yakakura yezviputa zvichienderana nezvinodiwa. Kana uine mhirizhonga pamusoro pokuti ungaita sei mafaira, tinokurudzira kuti uone mazano eGoogle aripo paIndaneti, asi zvinhu zvishoma zvinoda kukurumidza kutora zvinosanganisira mazita ekuchengetedza, mapepa emitambo, zvirongwa zvemitauro, nezvimwe.
Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti iyo yose yepawebsite yepaifambisi inofanira kudarika mazita nemahofisi kuti ave nechokwadi chokuti unhu hahuna kutombomira. Mashoko aya anowanikwa muGoogle Analytics. Imwe mazita akakodzera muzita ndiro zita rakarurama rinobatanidzwa newebsite yako uye rinogona kufuta yako mitsva yekutsvaga migumisiro zvichienderana nezvirongwa zvako. Kana iwe wakaneta nepamusoro-soro, iwe unogona kuedza sarudzo iyi kuderedza kuwedzera kwechikwata chesaiti yako. Asi iwe unofanira kugara uine chokwadi chekuti iwe hausati wabatwa nezita renhema rine mazita sezvo rinogona kuparadza nzvimbo yako.
Unofanirwa kuva nemafungiro ekuti nzira yemugwagwa wewebsite yako inobva kupi. Nokugadzira mafaira, unogona kuziva zvitubu zvemugwagwa uye kuwana ruzivo pamusoro peateri IP.
Nhamba huru ye spammers nevashambadzi vanoshandisa nzvimbo yako yepasiti uye zvirongwa zvayo nokutumira chitengesi chakaipa. Uyezve, vanowana mutauro wenyu, uye mafirita anotodzwa kusvika pamwero mukuru. Nzira yakanakisisa yekuvabvisa nayo ndeyokuona nzvimbo yako yekushanda zuva nezuva. Iwe unofanirwa kuramba uchinge uine maonero ekuwanda kwemaonero awakagamuchira uye kuti ungagadzirisa sei bounce rate.